မူရင်း စာအုပ် အမည် - The 100 ; A Ranking of the Most Influential Persons in History
မူရင်း စာရေးသူ - MICHAEL H. HART
ဘာသာပြန်သူ - ဒေါက်တာ သန်းထွန်း
အတၳုပ္ပတ္တိ စာပေတွေ ဖတ်ပါများလာတော့၊ လူ့သမိုင်းနှင့်ပက်သက်ပြီး သိလာရသည့် အဓိကအချက်တစ်ချက် ရှိလာသည်။ ကမ္ဘာကြီးကို အဓိက ပြောင်းလဲသူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ… ကမ္ဘာကြီးကို ထိထိရောက်ရောက် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သူတွေက ဘယ်နယ်ပယ်က လူတွေက အများစုလဲ… ဆိုတဲ့ မေးခွန်း၏ အဖြေပင်ဖြစ်သည်။
စာဖတ် စ, က တက်ကျမ်းဆန်ဆန် အတၳုပ္ပတ္တိစာအုပ်တွေနှင့်သာ အထိအတွေ့များခဲ့သည်။ လူသားစွမ်းဆောင် မှုတွေကို ချက်ကျ လက်ကျ ရေးသားထားသော အတၳုပ္ပတ္တိမျိုးဖြင့် သိပ်မထိတွေ့ဖူးသေး။ အတၳုပ္ပတ္တိစာအုပ် တွေ ဖတ်ပါများပြီး စာဖတ်သက် ရင့်ကျက်လာမှ အတၳုပ္ပတ္တိစာအုပ်တွေကို အမျိုးအစားခွဲတတ်လာခဲ့သည်။ နယ်ပယ်ခွဲတတ်လာခဲ့သည်။ အသွင်သဏ္႑ာန်ခွဲတတ်လာခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၉ နှစ်ကျော် လောက်က၊ ဓမ္မစေတီဆရာတော် ဦးကောသလ္လ ဟောကြားသည့် တရားတစ်ပုဒ်ကို အခုအချိန်အထိ စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်မိနေသေးသည်။ တရားတော် အမည်က “ထေရဝါဒနှင့် သရဏံဂုဏ်” ။ ဆရာ တော်က တရားထဲတွင် ကမ္ဘာ့လူထုက အဆင့်သတ်မှတ်ပြီး ပေးထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ အကြောင်းကို ထည့် ဟောသည်။ ကောင်းတာ မကောင်းတာ အပထား။ လူကြိုက်များသည် အတိုင်းအတာအလိုက်၊ အဆင့်များကို အနိမ့်အမြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့်အကြောင်း ထည့်ဟောသည်။ ဗုဒ္ဓက အဆင့် (၄) တွင်ရှိကြောင်း တရား ထဲ ထည့်ဟောသွားသည်။ အဆိုပါ တရားကို နာပြီး နောက်ပိုင်းကာလများ၌ ဆရာတော် ဘယ်အကိုးအကားကို ပြုပြီး ဟောကြားသလဲ ဆိုတာကို သိချင်မိသည်။ တရားထဲမှာတော့ အကိုးအကားကို အတိအကျ ထည့်ဟော မသွား။ သို့သော် မှတ်ဉာဏ်ထဲတွင် ဆရာတော် ဟောသည့် တရားကို စွဲမြဲနေသည်။
လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်လောက်က ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏ ကျော်စွာ ၁၀၀ ကို ဖတ်မိတော့မှ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက် က မပြည့်စုံသည့် အသိတစ်ခုကို ဒက်ခနဲ သိလိုက်မိသည်။ ဓမ္မစေတီ ဆရာတော်က ဒေါက်တာသန်းထွန်း စာ အုပ် ဖတ်ပြီး ဟောတာကိုး။ ဟောစဉ်တရားကို မှတ်မိနေသေးသည်။ မိုဟာမက်က နံပါတ် (၁)၊ နယူတန်က နံပါတ် (၂)၊ ယေရှုက နံပါတ် (၃)၊ ဗုဒ္ဓက နံပါတ်(၄) စသည်ဖြင့် ဗုဒ္ဓက ဘာ့ကြောင့် နံပါတ် (၄) နေရာမှာ ရှိရ သလဲ ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်ကို ဟောတာ အမှတ်ရနေမိသေးသည်။
တကယ် ဖတ်မိတဲ့အခါ၊ လူကြိုက်များခြင်းနဲ့ တိုင်းတာခြင်း မဟုတ်တာကို သိလိုက်ရသည်။ မူရင်းစာရေးသူက အတၳုပ္ပတ္တိရေးသားချက်တွင် ထည့်သွင်းသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ပေတံ (၃) ချောင်းဖြင့် ရှေ့နောက်၊ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ဆိုပြီး စဉ်သည်။
(၁) ဘယ်အခြေခံနဲ့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်က ကြီးမြင့်လာရပါသလဲ၊
(၂) ဒီလူရဲ့ အစွမ်းနဲ့ လူတွေ ဘယ်လောက်များများ အကျိုးခံစားရသလဲ၊
(၃) ဒီလူ့ကျေးဇူးကို လူတွေ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ခံစားရပါသလဲ၊
စသည့် ပေတံ (၃) ချောင်းဖြင့် အကဲဖြတ် နံပါတ်စဉ် ချသည်။
ကျော်စွာ ၁၀၀ တွင် ကမ္ဘာကြီးကို ကိုင်လှုပ်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည့် လူသားအာဇာနည်များအကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။ သူတို့၏ စွမ်းဆောင်ချက်များကို ရေရေလည်လည် ရေးသားထားသည်။ သို့သော် မူရင်းစာ ရေးသူ ကိုယ်တိုင်ကတော့ သိပ်ကျေနပ်ဟန်မတူ။ သို့ပေမယ့် မည်ကာမတ္တ အတၳုပ္ပတ္တိကျမ်းတစ်စောင်တော့ မဟုတ်။
အတၳုပ္ပတ္တိထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ အကြောင်း မဖတ်သေးခင်၊ ပထမဆုံးဖတ်သင့်သည့် အရာကတော့ ဘာသာပြန် သူ၏ အမှာစာနှင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် မူရင်းစာရေးသူ ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ပြီး ရေးသားခဲ့သည့် အမှာစာပင် ဖြစ်သည်။ မူရင်းစာရေးသူက နံပါတ်စဉ်များကို အရှေ့အနောက် စဉ်သည့် အနေရာ၌ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်က ပုဂ္ဂိုလ်များကို စဉ်သည့် အခါ ခက်ခဲကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။ စာအုပ်ရေးစဉ်ကာလက ဖြစ်ပျက်ခဲ့ သည့် အဖြစ်အပျက်များကို နောက်ဆုံးမူသေထားပြီး သုံးသပ်ခဲ့မှုသည် ချွတ်ယွင်းချက်များရှိကြောင်း ဝန်ခံတင်ပြ ထားသည်။ ဤတင်ပြချက် အမှာစာကို တင်ကြိုဖတ်မထားမိပါက၊ အတၳုပ္ပတ္တိ တစ်ခုလုံး၏ အချက်အလက်၊ အကြောင်းအချက်များသာ ရမည်။ ခြုံငုံသုံးသပ် ဆက်စပ် ဝေဖန်တတ်သည့် အမြင် လျော့ရနိုင်ချေများသည်။
ဟိုးယခင်က အမှာစာများကို ကျွန်တော် ကျော်ဖတ်လေ့ရှိသည်။ အမှာစာများကို သိပ်အလေးမမူတတ်။ အမှာ စာများ၏ ထိရောက် အရေးပါပုံကိုလည်း နားမလည်။ စာသမားသက်တမ်းရင့်လာသည့် အခါမှသာ စာအုပ်တစ် ခုလုံးကို အကဲဖြတ် သုံးသပ်ရာတွင်လည်း အမှာစာ၏ အရေးပါမှုသည် အဓိက အချက်တစ်ချက် ဖြစ်ပါလား ဆို တာကို နားလည်လာရသည်။ မူရင်းစာရေးသူ မိုက်ကယ် အိပ်ချ်ဟတ် ၏ အမှာစာကား၊ ကျော်စွာ ၁၀၀ စာအုပ်၌ အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္႑က ပါဝင်လျက်ရှိသည်။
နောက်တစ်ချက်ရှိသေးသည်။ ကျွန်တော် အတၳုပ္ပတ္တိစာပေတော်များများကို ဖတ်ခဲ့စဉ်က နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ ဘာသာရေး၊ အတွေးအခေါ်နှင့် စာပေ နယ်ပယ်မှ လူများအကြောင်းသာ အဖတ်များခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးတွင် ထိုသို့သော လူအများစုကသာ ကမ္ဘာကြီးကို ပိုမိုလွှမ်းမိုး ပြုပြင်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဟုလည်း မသိစိတ်ထဲမှာ စွဲမြဲနေ သည်။ တကယ် လေ့လာကြည့်သည့် အခါမှ ကမ္ဘာကြီးကို တကယ်ပြောင်းလဲစေသူများ၏ ထိပ်ဆုံးစာရင်းတွင် ဘာသာရေးပြီးလျှင် အခြား စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ အတွေးအခေါ် စသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များထက် လူအများ၏ ဘဝနှင့် ကမ္ဘာကြီးကို ရေရှည်၊ ကျယ်ပြန့်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်သူများမှာ သိပ္ပံပညာရှင်များဖြစ်သည်ကို ထူးဆန်းစွာ တွေ့ရ တော့သည်။ ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်နယ်ပယ်များကို ခုန်မင်စွာ လိုက်စားတတ်သည့် ကျွန်တော့်အဖို့ သိပ္ပံသမားများကို မသိစိတ်အတွင်းမှာ ခပ်နှိမ်နှိမ်ထားချင်သည့် စိတ်က နူးညံ့စွာ ကိန်းဝပ်နေသည်။ လောက်လောက်လားလား လေ့လာသည့် အခါ၌ သိပ္ပံသမားများသည် ကမ္ဘာကြီးအပေါ် ထင်သာမြင်သာမဟုတ်ဘဲ လွှမ်းမိုးနေသည့် အချက်များကို များစွာ တွေ့လာရသည်။
သိပ်မကြာခင်က၊ ကျွန်တော့် ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သူ ဆရာဦးရွှေကျော်က အတၳုပ္ပတ္တိစာအုပ်တစ်အုပ် လက်ဆောင်ပေးသည်။ စာရေးသူ အမည်က ဇာနည်။ စာအုပ် အမည်က ကမ္ဘာကို ဖန်တီးသူများ။ ၎င်းစာအုပ် အမှာ စာပါ အချက်ကို ကျွန်တော် ယုံကြည်လက်ခံမိသည်။
အမှာစာ၏ ပထမ စာပိုဒ်၊ ဒုတိယ ဝါကျ၌
(ရောဂါဘယများအတွက် ကာကွယ်ဆေးကို တီထွင်သော ဆေးပညာရှင်သည် ပိရမစ်ဆောက်သော ဘုရင်များ၊ တံတိုင်းဆောက်သော ဧကရာဇ်များထက် ကမ္ဘာသားတို့အတွက် အကျိုးပြုသည်ဟု မြင်ပါသည်၊ လျှပ်စစ်ကို တီထွင်သော သိပ္ပံပညာရှင်သည် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၊ ဧကရာဇ်များ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များထက် ကမ္ဘာကြီး ကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်ဟု ယူဆပါသည်)
ဤအယူအဆကို လက်ခံသည်။ ကျော်စွာ ၁၀၀ ကိုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ယူဆ၊ မှတ်ယူ၍ ပြန်ဖတ်မိ သည်။ သိပ္ပံသမားများနှင့် အာဏာသမားများ ကို ယှဉ်တွဲ၍ အတၳုပ္ပတ္တိ စာပေများကို ဖတ်မိလျှင်ဖြင့်၊ ပညာအတွက် အမြင် ရှုထောင့်သစ်တစ်ရပ် ရရှိနိုင်ပါကြောင်း….
ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲစေသူများကား မည်သူနည်း။
ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်တီးသူများကား မည်သူနည်း။
သတင်းစာ ဂျာနယ်၊ ဖေ့ဘုတ် စခရင်များပေါ်က လူသားများလား။
ပူစပ်လောင်စပ် အခန်းကျဉ်းကလေးထဲက၊ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ကြိုးကုပ် အားထုတ်နေသည့် လူတစ်ယောက်လား။
ခင်ဗျား စဉ်းစား…. ။
၁၀/ ၃ / ၂၀၁၇